Fepetra sy fepetra ho an'ny fivarotana - The Reward Foundation
Home Fepetra sy fepetra ho an'ny fivarotana
Fahazoan-dàlana ho an'ny fampianarana
Ny fampiasanao ireo fitaovana manana fahazoan-dàlana (araka ny voafaritra etsy ambany) dia miankina tanteraka amin'ny Fepetra sy fepetra ao anatin'ity Lisansa Fitaovana fampianarana ity (ity "Lisansa") ity. Ity fahazoan-dàlana ity dia fifanarahana mifamatotra ara-dalàna eo aminao sy ny The Reward Foundation mifandraika amin'ny fampiasanao ny Fahazoan-dàlana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Fitaovana Fahazoan-dàlana dia manamarina fa manaiky ireo fepetra sy fepetra voalaza ao anatin'ity fahazoan-dàlana ity ianao ary manaiky ny hofehezin'izy ireo. Azafady mba vakio tsara ny Terms sy Conditions ao amin'ity lisansa ity.
1.1 Ireo fepetra sy fepetra ireo dia mifehy ny fivarotana sy ny fanomezana fitaovana azo sintonina amin'ny alàlan'ny tranokalanay. Izy ireo koa dia manarona ny fampiasana manaraka ireo fitaovana fampianarana ireo.
1.2 Hangatahana aminao ny hanome ny fifanarahana mazava arak'ireto Terms sy Conditions ireto alohan'ny hametrahana baiko amin'ny tranokalanay.
1.3 Ity antontan-taratasy ity dia tsy misy fiatraikany amin'ny zon'ny lalàna anananao amin'ny maha mpanjifa anao.
1.4 Ny politikantsika manokana dia mety jerena eto.
1.5. Manaiky ianao fa mety ho toa tsy mety amin'ny olona sasany ny lohahevitra voarakitra ao anatin'ny lesona. Mifandray amin'ny fitondran-tena mamoa fady izany. Ny dingana mety rehetra dia noraisinay mba tsy hasiana sary vetaveta aseho. Nanome toky koa izahay fa mifanentana amin'ilay fiteny resahina amin'ny ankizy ny fiteny. Amin'ny fanekena ireo fepetra sy fepetra ireo dia ekenao ny loza mety hitranga amin'ny fahatsapana alahelo na fahatsapana mandratra izay mety hitranga mandritra ny fanomanana lesona na ny fandefasana azy.
1.6 Ho fisorohana ny fisalasalana, ity Fahazoan-dàlana hampiasa ireo fitaovana ity dia tsy manome ny fananana ireo akany manana fahazoan-dàlana.
2.1 Amin'ireto fepetra sy fepetra ireto:
(a) "izahay" dia midika hoe The Reward Foundation, Fikambanana Skotisialy Skotisialy natsangana tamin'ny lalàn'i Ekosy miaraka amin'ny laharam-pahamehana SCO44948. Ny biraontsika voasoratra anarana dia: The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom. (ary "isika sy" antsika "dia tokony hadika araka izany);
(b) "ianao" dia midika hoe ny mpanjifanay na ny mpanjifa ho avy eo ambanin'ireo fepetra sy fepetra ireo (ary ny "anao" dia tokony hadika araka izany);
(c) "fitaovan'ny fampianarana" dia midika ho fitaovan'ny fampianarana izay azo vidiana na alaina maimaim-poana ao amin'ny tranonkalantsika;
(d) ny "fitaovanao" dia midika ho fitaovan'ny fampianarana toa anao izay novidinao na nalakinao maimaimpoana tamin'ny alàlan'ny tranokalanay. Ity dia misy ny kinova nohavaozina na nohavaozina ireo taranja fampianarana azonay omena anao indraindray;
e) "Lisansa" dia manana ny heviny voalaza ao amin'ny sasin-tenin'ity Lisansa ity; ary
(f) "Fitaovana manana fahazoan-dàlana" dia midika ho asa-kanto na haisoratra, sary, horonantsary na fandraisam-peo, tahiry ary / na fitaovana hafa natolotry ny Mpisoratra anarana anao hampiasaina eo ambanin'ity Lisansa ity. Ny licensor dia midika hoe The Reward Foundation, fikambanana Skotish Charities Incorporated Organisation ambanin'ny lalàn'i Ekosy miaraka amin'ny laharam-pahamehana SCO44948. Ny biraontsika voasoratra anarana dia: The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, United Kingdom.
(g) "Fahazoan-dàlana ho an'ny isam-batan'olona" dia ny fahazoan-dàlana novidiana, na nekena maimaimpoana, amin'ny alàlan'ny fampiasana azy manokana. Tsy azo afindra amin'ny olon-kafa, any amin'ny sekoly na andrim-panjakana.
(h) "Lisansa Multi-User" dia fahazoan-dàlana novidiana, na nekena maimaimpoana, avy amin'ny sekoly na andrim-panjakana hafa izay azo omena amin'ny fampiasana orinasa hanome serivisy fanabeazana.
3. Fomba fizahana
3.1 Ny dokam-barotra momba ny Mazava ho azy fa ao amin'ny tranokalanay dia midika hoe "fanasana hitsaboana" fa tsy tolotra fifanarahana.
3.2 Tsy misy fifanarahana hanan-kery eo aminao sy aminay, raha tsy ary mandra-pandraisanay ny baikonao. Izany dia hifanaraka amin'ny fomba voalaza ao amin'ity fizarana 3 ity.
3.3 Mba hidirana amin'ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny tranokalanay hividianana na hahazoana fitaovana azo sintonina maimaimpoana maimaimpoana avy aminay, ireto dingana manaraka ireto dia tsy maintsy atao. Tsy maintsy ampidirinao amin'ny harona fiantsenanao ireo fitaovana fanabeazana tianao, avy eo mandroso amin'ny Checkout; raha mpanjifa vaovao ianao dia manana safidy hamorona kaonty miaraka aminay ary hiditra; ho an'ny mpanjifa tsy miankina, ny kaonty dia tsy voatery, saingy voatery ho an'ny mpanjifa orinasa izy ireo; raha mpanjifa efa misy ianao dia tsy maintsy ampidirinao ny antsipirian'ny fidiranao; vantany vao tafiditra ianao, dia tsy maintsy manaiky ny fehezan'ity antontan-taratasy ity ianao; hafindra amin'ny tranokalan'ny mpanome tolotra fandoavam-bola ianao, ary ny mpanome tolotra fandoavam-bola dia hitantana ny fandoavanao vola; Handefa fanamafisana ny baiko avy eo izahay. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa fifanarahana mamatotra ny kaomandinao. Raha tsy izany, hamafisinay amin'ny alàlan'ny mailaka fa tsy afaka mamaly ny baikonao izahay.
3.4 Hanana fotoana ahafahana mamantatra sy manitsy ireo lesoka fidirana alohan'ny hanaovana ny baikoo ianao.
4.1 Ny vidinay dia voalaza ao amin'ny tranokalanay. Raha misy vidiny £ 0.00 ny vidiny, dia mbola hihatra ny fahazoan-dàlana, na dia tsy misy vola aza aloany amin'izany.
4.2 Isika indraindray dia hanova ny vidiny voalaza ao amin'ny tranonkalantsika. Tsy hisy fiatraikany amin'ny fifanarahana izay nanomboka nanan-kery teo aloha.
4.3 Ny vola rehetra voalaza ao amin'ireto Terms sy Conditions ireto na amin'ny tranokalanay dia voalaza fa tsy misy ny VAT. Izahay dia tsy mitaky VAT.
4.4 Ny vidiny voatondro isaky ny lesona na ny bundle dia ho an'ny olona iray mividy fahazoan-dàlana hampiasaina manokana.
4.5 Raha te hividy na hahazo fampidinana maimaim-poana ireo fitaovantsika ireo sekoly, andrim-panjakana ary orinasa hafa dia tsy maintsy mividy Lisansa Multi-User izy ireo. Izany dia vidiana amin'ny 3.0 heny amin'ny isam-batan'olona. Avy eo dia azo ampiasaina ao anatin'ny sekoly na andrim-panjakana izy io ary tsy hifamatotra amin'ny mpampianatra tsirairay na mpikambana ao amin'ny mpiasa. Raha atolotra maimaim-poana ny fitaovana, ny solontena manao fividianana maimaimpoana amin'ny anaran'ny sekoly, fikambanana na orinasa hafa dia mbola mila misafidy fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa marobe mba hahazoana antoka fa misy fifandraisana ara-dalàna mifanaraka amin'ny The Reward Foundation sy ny tompon'ny fahazoan-dàlana.
5.1 Tsy maintsy, mandritra ny fizotry ny fizahana, dia andoavanao ny vidin'ny akora fampianarana andoavanao. Ny vidiny voafantina dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny karazana Lisansa voafantina, Lisansa isam-batan'olona na Lisansa maro-mpampiasa.
5.2 Ny fandoavam-bola dia azo atao amin'ny alàlan'ny fomba avela voafaritra ao amin'ny tranokalaninay indraindray. Izahay izao dia tsy mandray afa-tsy amin'ny fandoavana vola amin'ny alàlan'ny PayPal, na izany aza dia mamela ny fampiasana ny carte de crédit sy debit lehibe rehetra.
6. Fahazoan-dàlana ireo fitaovam-pianarana
6.1 Hanome anao ny fitaovanao izahay amin'ny endrika na endrika voalaza ao amin'ny tranokalanay. Hanao izany amin'ny alàlan'ny fomba toy izany isika sy ao anatin'ny vanim-potoana toy izay voafaritra ao amin'ny tranonkalantsika. Amin'ny ankapobeny, ny fanaterana ny mailaka mamela ny fisintomana dia saika eo noho eo.
6.2 Miankina amin'ny fandoavanao ny vidiny azo ampiharina sy ny fanarahana ireo fepetra sy fepetra ireo dia manome anao fahazoan-dàlana manerantany, tsy mandany fotoana, tsy irery, tsy azo nafindra hampiasa ny fitaovanao ianao avelan'ny Fizarana 6.3, manome fa tsy tokony hampiasa na inona na inona amin'ny fitaovanao ianao izay voararan'ny Fizarana 6.4.
6.3 Ny "fampiasana azo ekena" amin'ny fitaovanao dia:
(a) fampidinana kopian'ny iray amin'ireo fitaovanao rehetra;
b) ho an'ny fahazoan-dàlana ho an'ny isam-batan'olona: mifandraika amin'ny fitaovana an-tsoratra sy an-tsary: ​​fanaovana, fitehirizana ary fijerena kopian'ny fitaovanao amin'ny taranja mihoatra ny 3 birao, solosaina finday na kahie, mpamaky ebook, finday avo lenta, solosaina takelaka na fitaovana mitovy amin'izany;
(c) ho an'ny Lisansa Multi-User: mifandraika amin'ny fitaovana an-tsoratra sy an-tsary: ​​fanaovana, fitehirizana ary hijerena kopian'ny fitaovanao tsy mihoatra ny 9 birao, solosaina finday na kahie, mpamaky ebook, finday avo lenta, solosaina takelaka na fitaovana mitovy amin'izany ;
(d) ho an'ny Fahazoan-dàlana ho an'ny isam-batan'olona: mifandraika amin'ny fitaovam-pampianarana feo sy horonan-tsary: ​​fanaovana, fitehirizana ary filalaovana kopia ny fitaovanao amin'ny tabilao, solosaina finday na kahie solosaina finday, solosaina finday, solosaina takelaka, mpilalao haino aman-jery na fitaovana mitovy amin'izany;
(e) ho an'ny Lisansa Multi-User: mifandraika amin'ny fitaovana fampianarana haino aman-jery sy horonan-tsary: ​​fanaovana, fitehirizana ary filalaovana kopia ny fitaovanao amin'ny tabilao 9, solosaina findainy na solosaina kahie, smartphone, solosaina takelaka, mpilalao haino aman-jery na fitaovana mitovy amin'izany ;
(f) ho an'ny Fahazoan-dàlana ho an'ny isam-batan'olona: manonta kopia roa isaky ny fitaovam-pianarana nosoratanao fotsiny ho anao manokana;
(g) ho an'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa marobe: manonta kopia 6 isaky ny fitaovanao an-tsoratra nosoratana ho an'ny fampiasanao manokana; ary
(h) ny fandrarana fanontana ny fahazoan-dàlana dia tsy mihatra amin'ny fanaovana fizarana ho an'ny tanjona fampianarana. Amin'ireo tranga ireo dia mihatra ny fetra 1000 mpianatra.
6.4 Ny "fampiasana voarara" amin'ny fitaovanao dia:
(a) ny famoahana, fivarotana, fahazoan-dàlana, fahazoan-dàlana kely, fanofana, famindrana, fandefasana, fampielezana, fizarana na fizarana indray ny fitaovan'ny fampianarana rehetra (na ny ampahany aminy) na amin'ny endrika inona na manao ahoana;
b) ny fampiasana fitaovan'ny fampianarana rehetra (na ny ampahany aminy) amin'ny fomba rehetra izay tsy ara-dalàna na manitsakitsaka ny zon'ny olona eo ambany lalàna misy, na amin'ny fomba hafa manafintohina, tsy mendrika, manavakavaka na mahasosotra;
(c) ny fampiasana ny fitaovan'ny fampianarana rehetra (na ny ampahany aminy) hifaninana amintsika, na mivantana na tsia; ary
(d) fampiasana ara-barotra misy fampidinana (na ampahany aminy). Ity fizarana ity dia tsy mamepetra ny fandefasana lesona miorina amin'ny fitaovana, manome fa tsy misy na inona na inona ato amin'ity fizarana 6.4 ity mandrara na mametra anao na olona hafa tsy hanao zavatra avelan'ny lalàna mihatra mihatra.
6.5 Manome toky anay ianao fa afaka miditra amin'ireo rafitra solosaina ilaina, rafitry ny haino aman-jery, rindrambaiko ary fifandraisana amin'ny tamba-jotra hahazoana sy hankafizanao ny tombotsoan'ny fitaovanao.
6.6 Ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra sy ny zon'ny hafa amin'ny fitaovam-pianarana tsy nomen'ireo fepetra sy fepetra voalaza ireo dia natokana ho amin'izany.
6.7 Tsy maintsy mitazona ianao, ary tsy tokony hamafa, hanakona na hanaisotra, ny fampandrenesana momba ny zon'ny mpamorona sy ny fampandrenesana hafa an'ny tompona na amin'ny fitaovam-pianarana rehetra.
6.8 Ny zonao nomena anao ao anatin'ireto Terms sy Conditions ireto dia anao manokana. Tsy tokony avelanao hisy antoko fahatelo hampihatra ireo zony ireo. Ny zony nomena anao amin'ny fahazoan-dàlana Multi-User voafetra amin'ny andrim-panjakana na orinasa. Tsy tokony avelanao hisy antoko fahatelo hampihatra ireo zony ireo.
6.9 Ny fetra fampiasan'ireto fitaovana ireto dia voafetra ho an'ny mpianatra 1000 isaky ny Lisitra.
6.10 Raha mandika ny fepetra rehetra momba ireo fepetra sy fepetra ireo ianao, dia hofoanana avy hatrany ilay fahazoan-dàlana voalaza ao amin'ity fizarana faha-6 ity.
6.11 Azonao atao ny manafoana ny fahazoan-dàlana voalaza ao amin'ity fizarana 6 ity amin'ny famafana ny kopian'ny fitaovana maodely mifandraika aminao na ny fifehezana anao.
6.12 Rehefa tapitra ny fahazoan-dàlana ao amin'ity Fizarana 6 ity, dia tsy maintsy, raha mbola tsy nanao izany ianao, hamafa avy hatrany tsy ho afaka amin'ny rafitry ny solosainao sy ny fitaovana elektronika hafa ny kopian'ny fitaovan'ny taranja mifandraika aminao na hifehezana anao, ary maharitra ravao ny kopian'ny fitaovana maoderina mifandraika aminao na fehezinao.
7. fifanarahana amin'ny elanelan-tany: havanana ny fanafoanana
7.1 Ity Fizarana 7 ity dia mihatra raha ary raha toa ka manolo-tena hifanaraka aminay ianao, na manao fifanarahana aminay, amin'ny maha mpanjifa anao - izany hoe amin'ny maha olona anao amin'ny ankapobeny na ivelan'ny varotrao, ny asa aman-draharaha, ny asa-tanana na ny asanao.
7.2 Azonao esorina ny tolotra hidirana amin'ny fifanarahana miaraka aminay amin'ny alàlan'ny tranokalanay, na hanafoana ny fifanarahana nifanaovana taminay tamin'ny alàlan'ny tranokalanay, amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny fe-potoana:
a) manomboka amin'ny fandefasana ny tolotra omenao; ary
b) mifarana amin'ny faran'ny 14 andro aorian'ny andro nanaovana ny fifanarahana, miankina amin'ny Fizarana 7.3. Tsy mila manome antony hisintonana na hanafoanana anao ianao.
7.3 Manaiky ianao fa azonay manomboka ny fanomezana fitaovana ho an'ny fampianarana alohan'ny faran'ny vanim-potoana resahina ao amin'ny Fizarana 7.2. Manaiky ianao fa, raha manomboka manome ny fitaovana fampianarana izahay alohan'ny faran'io fe-potoana io dia ho very ny zonao hanafoana azy ao amin'ny Fizarana 7.2.
7.4 Mba hisintonana ny tolotra hanaovan-tsonia na hanafoanana ny fifanarahana mifototra amin'ny voalaza ao amin'ity fizarana 7 ity dia tsy maintsy ampahafantarinao anay ny fanapaha-kevitrao hisintona na hanafoana (araka ny tranga misy). Azonao atao ny mampahafantatra anay amin'ny alàlan'ny fanambarana mazava momba ny fanapaha-kevitra. Raha misy ny fanafoanana dia azonao atao ny mampahafantatra anay amin'ny alàlan'ny bokotra 'Orders' eo amin'ny pejy My Account. Io dia hahafahanao manomboka dingana iray hamerenana ny volanao. Mba hahatratrarana ny fe-potoana fanafoanana dia ampy ho anao ny mandefa ny fifandraisanao momba ny fampiasana ny zony hanafoanana alohan'ny fotoana fanafoanana.
7.5 Raha manafoana ny baiko ianao amin'ny fotokevitra voalaza ao amin'ity fizarana 7 ity dia hahazo famerenam-bola feno ianao amin'ny vola aloanao aminay momba ny baiko. Raha tsy nandoa vola ianao hamita ny baiko dia tsy hisy vola haverina.
7.6 Hiverina amin'ny laoniny ny vola izahay amin'ny alàlan'ny fomba nampiasana ny fandoavambola, raha tsy efa nifanaraka mazava tsara ianao. Na ahoana na ahoana, dia tsy handoa sarany ianao amin'ny valin'ny famerenam-bola.
7.7 Hodininay ny famerenam-bola ho anao vokatry ny fanafoanana araka ny voalaza ao amin'ity fizarana ity 7. Tsy hisy hatak'andro izany ary, na izany na tsy izany, ao anatin'ny fe-potoana 14 andro aorian'ny andro izay nampandrenesina anay ny fanafoanana.
7.8 Raha vantany vao angatahana ny famerenam-bola ary ekena dia nofoanana daholo ireo fampidinana tsy ampiasaina.
8. Warranty sy solontena
8.1 Ianao manome antoka sy misolo tena anay fa:
a) afaka manao fifanarahana mamatotra ianao;
b) manana fahefana sy fahefana ary fahafaha-miasa feno hanaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ianao; ary
d) ny fampahalalana rehetra omenao anay mifandraika amin'ny baikonao dia marina, marina, feno, ankehitriny ary tsy mamitaka.
8.2 Mampahafantatra anao izahay fa:
a) ny fitaovanao dia manana kalitao mahafa-po;
b) ny fitaovanao dia ho mety tsara amin'ny tanjona rehetra ampahafantarinao anay alohan'ny hanaovana fifanarahana arak'ireto fepetra sy fepetra ireto;
(c) ny fitaovanao dia hifanaraka amin'izay famaritana nomenay anao; ary
(d) zonay ny manome ny fitaovanao ho anao.
8.3 Ny fiantohana sy ny solontena rehetra mifandraika amin'ny fitaovan'ny fampianarana dia voafaritra ao anatin'ireto fepetra sy fepetra ireto. Raha faran'izay lehibe avelan'ny lalàna manan-kery sy miankina amin'ny Fizarana 9.1, ny fiantohana rehetra sy ny solontena rehetra dia esorina miharihary.
9. Fepetra sy fanilihana ny andraikitra
9.1 Tsy misy na inona na inona amin'ireto fepetra sy fepetra ireto:
a) mametra na manilika ny trosa rehetra amin'ny fahafatesan'ny olona na ny ratra mahazo azy vokatry ny tsy fitandremana;
b) mametra na manilika ny andraikitra amin'ny fisolokiana na fisolokiana diso;
(c) mametra ny trosa rehetra amin'ny fomba rehetra izay tsy avela araka ny lalàna azo ampiharina; na
(d) manilika ny trosa rehetra izay mety tsy azo esorina araky ny lalàna manan-kery, ary, raha mpanjifa ianao, ny zonao ara-dalàna dia tsy ho esorina na hoferan'ireto fehezan-dalàna sy fepetra ireto, afa-tsy amin'ny fetra avelan'ny lalàna.
9.2 Ny fetra sy ny fanilihana ny andraikitra napetraka ao amin'ity fizarana 9 ity sy amin'ny toeran-kafa ao anatin'ireto fepetra sy fepetra ireto:
(a) dia iharan'ny Fizarana 9.1; ary
b) mifehy ny trosa rehetra mipoitra ambanin'ireto fepetra sy fepetra ireto na mifandraika amin'ny lohahevitr'ireo fepetra sy fepetra ireo, ao anatin'izany ny trosa mifandraika amin'ny fifanarahana, amin'ny delict (ao anatin'izany ny tsy fitandremana) sy ny fanitsakitsahana ny adidy ara-dalàna, afa-tsy izay voalaza mazava tsara amin'ireto.
9.3 Tsy tompon'andraikitra aminao izahay raha misy fatiantoka mipoitra amin'ny fisehoan-javatra na fisehoan-javatra tsy takatry ny sainay voafehy.
9.4 Tsy tompon'andraikitra aminao izahay raha misy fatiantoka eo amin'ny orinasa, ao anatin'izany (na tsy misy fetra) ny fahaverezana na fahasimban'ny tombom-barotra, ny vola miditra, ny fidiram-bola, ny fampiasana, ny famokarana, ny tahiry mialoha, ny orinasa, ny fifanarahana, ny tombontsoa ara-barotra na ny finiavana.
9.5 Tsy tompon'andraikitra aminao izahay raha misy fatiantoka na kolikoly amin'ny tahirin-kevitra, tahiry ary rindrambaiko, ka manome izany raha toa ka mifanaotra aminay amin'ireto Terms sy Conditions amin'ny maha mpanjifa ireto ianao dia tsy hampiharina ity Fizarana 9.5 ity.
9.6 Tsy tompon'andraikitra aminao izahay raha misy fatiantoka manokana, tsy mivantana na vokany, manome anao fa raha toa mifanerasera aminay amin'ireto fepetra sy fepetra ireto ianao amin'ny maha mpanjifa anao dia tsy hampiharina ity Fizarana 9.6 ity.
9.7 Manaiky ianao fa liana amin'ny famerana ny tompon'andraikitra manokana amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpiasa izahay. Noho izany, rehefa mijery an'io tombotsoanao io ianao dia ekenao fa olom-banona voafetra izahay; ekenao fa tsy hitondra fitakiana manokana amin'ireo manamboninay na mpiasa anay izahay manoloana ny fatiantoka mahazo anao mifandraika amin'ny tranokala na ireo Fepetra sy fepetra ireo (mazava ho azy, tsy hametra na hanilika ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa tompon'andraikitra voafetra izany. ny tenany manokana ho an'ny fihetsika sy ny tsy fanaon'ireo mpiandraikitra sy mpiasa ao aminay).
9.8 Ny andraikitray mitambatra aminao manoloana ny fifanarahana rehetra hanomezana tolotra ho anao araka ireo fepetra sy fepetra ireo dia tsy tokony hihoatra ny lehibe indrindra amin'ny:
(a) £ 100.00; ary
b) ny totalin'ny vola aloa sy aloa aminay ao anatin'ny fifanarahana.
(c) raha tsy nandoa vola ianao hampidinana ny fitaovantsika, dia ny adidy lehibe indrindra azonao atao manoloana ny fifanarahana hanomezana tolotra izay hapetraka amin'ny £ 1.00.
10.1 Azontsika atao ny manitsy ireo fepetra sy fepetra ireo tsindraindray amin'ny famoahana kinova vaovao ao amin'ny tranonkalantsika.
10.2 Ny fanitsiana ireo Fepetra sy fepetra ireo dia hihatra amin'ireo fifanarahana natao tamina fotoana rehetra taorian'ny fotoanan'ny fanitsiana fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fifanarahana natao alohan'ny fotoanan'ny fanovana.
11.1 Manaiky ianao fa afaka manendry, mamindra, manao fifanarahana ifanaovanay izahay raha tsy hoe mifampiraharaha amin'ny zonay sy / na adidy arak'ireto fepetra sy fepetra ireto - raha toa ka mpanjifa ianao dia tsy mihena ny fiantohana izay manome tombony anao ambanin'ireto Terms sy Conditions ireto.
11.2 Tsy azonao atao ny manome, mamindra, manao fifanarahana na mifanaiky alalana amin'ny zonao sy / na adidy arak'ireto fehezan-dalàna sy fepetra ireto raha tsy efa nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fanekena voasoratra izahay.
12. Tsy misy fanilihana
12.1 Tsy misy fanitsakitsahana ny fifanarahana fifanarahana arak'ireto fepetra sy fepetra ireto no hafoana afa-tsy ny fahazoan-dàlana an-tsoratra avy amin'ny antoko tsy mandika.
12.2 Tsy misy fanafoanana ny fandikana ny fifanarahana arak'ireto fepetra sy fepetra ireto azo adika ho toy ny fandavana na fitohizan'ny fandikan-dalàna hafa na fifanarahana hafa amin'ny fifanarahana.
13.1 Raha misy fepetra arahana amin'ireto fehezan-dalàna sy fepetra ireto dia apetraky ny fitsarana na manam-pahefana manan-kery hafa ho tsy ara-dalàna na / na tsy azo ampiharina, dia hitohy ny lalàna hafa.
13.2 Raha misy lalàna tsy ara-dalàna sy / na tsy azo ampiharina amin'ireto fepetra sy fepetra ireto raha toa ka voahaja ny lalàna raha toa ka voafafa ny ampahany, dia heverina ho voafafa io ampahany io ary ny tohin'ny vatsy dia hitohy hatrany.
14. Zon'ny antoko fahatelo
14.1 Ny fifanarahana arak'ireto Terms sy Conditions ireto dia ho tombontsoantsika sy tombotsoanao. Tsy natao hanasoavana na hampiharin'ny antoko fahatelo.
14.2 Ny fampiharana ny zon'ny antoko eo ambanin'ny fifanarahana arak'ireo fepetra sy fepetra ireo dia tsy miankina amin'ny faneken'ny antoko fahatelo.
15. Fifanarahana iray manontolo
15.1 Miankina amin'ny Fizarana 9.1, ireo Fepetra sy fepetra ireo dia ny fifanarahana iray manontolo eo aminao sy aminay momba ny fivarotana sy ny fividianana ny fampidinana anay (ao anatin'izany ny fisintomana maimaimpoana) sy ny fampiasana ireo fampidinana ireo, ary hihoatra ny fifanarahana teo aloha teo aminao sy izahay mifandraika amin'ny fivarotana sy fividianana ny fampidinana anay ary ny fampiasana ireo fampidinana ireo.
16. lalàna sy fahefana
16.1 Ireo fepetra sy fepetra ireo dia hofehezina sy hadika mifanaraka amin'ny lalàna Skoto.
16.2 Ny fifanolanana rehetra mifandraika amin'ireo Fepetra sy fepetra ireo dia miankina amin'ny fahefan'ny fitsarana any Ekosy.
17. Fanambarana ny lalàna sy ny lalàna mifehy
17.1 Izahay dia tsy hametraka kopian'ny Terms sy ny fepetra manokana mifandraika amin'ny mpampiasa na mpanjifa tsirairay. Raha manavao ireo Fepetra sy fepetra ireo izahay dia tsy ho hita ao amin'ny tranonkalantsika intsony ilay kinova nifanekenao voalohany. Manoro hevitra anao izahay mba hihevitra ny hitahiry ny dika mitovy amin'ireto fepetra sy fepetra ireto hojerena amin'ny ho avy.
17.2 Ireo fepetra sy fepetra ireo dia tsy misy amin'ny teny anglisy ihany. Na dia misy amin'ny tranokalanay aza ny GTranslate, dia tsy mandray andraikitra amin'ny kalitaon'ny fandikan-teny amin'ireo fepetra sy fepetra napetrak'io fotodrafitrasa io izahay. Ny kinova amin'ny fiteny anglisy no hany fampiharana azo ampiharina ara-dalàna.
17.3 Tsy voasoratra anarana ho an'ny VAT izahay.
17.4 Ny tranokalan'ny Vondrona Eropeana sehatra famahana olana amin'ny Internet dia misy ao amin'ny https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Ny sehatra famahana olana amin'ny Internet dia azo ampiasaina hamahana ny olana.
18. Ny antsipiriany
18.1 Ity tranokala ity dia tantanan'ny The Reward Foundation.
18.2 Izahay dia voasoratra anarana any Scotland amin'ny maha fikambanana Scottish Charities Incorporated an-tsekoly SCO 44948. Ny biraonay voasoratra anarana dia ao amin'ny The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.3 Ny toeram-pandraharahana lehibe dia ny The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.
18.4 Afaka mifandray aminay ianao:
(a) amin'ny alàlan'ny paositra, amin'ny alàlan'ny adiresy paositra voalaza etsy ambony;
b) amin'ny fampiasana ny pejin'ny fifandraisana amin'ny tranokalanay https://rewardfoundation.org/contact/;
(c) amin'ny alàlan'ny telefaona, amin'ny laharan'ny fifandraisana navoaka tao amin'ny tranonkalanay indraindray; na
(d) amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny fampiasana contact@rewardfoundation.org.
Version - 21 Oktobra 2020.